20 အဘို့ရလဒ် gumball games
Gumball မျက်မမြင်မိုက်သောသူကိုကြီးစွာသောရူပဗေဒ-based ပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အသငျသညျ Rainbow စုဆောင်းအဖြစ်သေတ္တာများနှင့်တုံ pads အားမရသဖြင့်အသီးအသီးအခြားတွေ့ဆုံရန်နှစ်ခုဇာတ်ကောင်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Gumball ကျောင်း House Rush ။ ယခုကျောင်းမှအိမ် Rush Play! Elmore အငယ်တန်းအမြင့်တစ်ယိုစိမ့်ပေါပွီ! မြေတပြင်လုံးသည်ကျောင်းရေကြီးမှုရှေ့တော်၌ထိုယိုစိမ့်ရပ်တန့်ဖို့ဒါဝင်နှင့် Gumball အဖြစ်ရေးအဖွဲ့ကိုတက်။ ကိုတက်, ရေကူးခြင်းနှင့်သုံးကြီးမားသောအဆင့်ဆင့်အတွက်လေ့လာစူးစမ်း။
ben 10 snowbrawl ရန်ပွဲ 2
စန်တာအကာတွန်းကွန်ယက်မှဇာတ်ကောင်များအားလုံးကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်ဘင် 10 SnowBrawl Fight2snowball တိုက်ပွဲများပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ရန်ပြသ! ဒီခရစ္စမတ်ကာလအစဉ်အမြဲစွန့်စားမှုအချိန်ကနေရေခဲပြင်ရှင်ဘုရင်မိန့်တော်မူ၏ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအသင်းကိုရလာတဲ့အခါ
အသစ် Super Mario ကမ္ဘာ3ဂိမ်း
ရိုက်နှက်ရန်နောက်ထပ်အတိုအနညျးငယျအဆငျ့ကြောင်းအခြား Mario ကမ္ဘာ။
ဒီခရစ်စမတ်အဘို့ရယ်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, လာသောအခါပြဇာတ်သင်ကမကြိုက်ဘူးပါလိမ့်မယ်။ စန်တာ Claus နှင့်အတူခရစ္စမတ်, Rigby အကောင်အထည်ဖော်မှုအခက်အခဲများစဉ်အတွင်း။ Rigby ပစ်မှတ်အပေါ်အစာရှောင်ပြေးကူညီပါများနှင့်အတားအဆီးများကျော်လွှား။
ဒါကလက်ျာရဲ့အဘီလူးနည်းနည်းငါးသေးကိုထပ်သွေးထွက်သံယိုထိတ်လန့်ပြန်လည်ရှင်သန်ပြန်၏! action ကိုစီးရီးအတွက်စတုတ္ထဂိမ်းကိုသင်အရိုးပယ် ပို. ပင်အသားကိုပေးတော်မူ၏။ ရှာဖွေရ, ဘဏ္ဍာကိုရှောင်ရှားရန်သစ်တစ်ခုမြေပုံကိုပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိအတားအဆီးများနှင့်အတူသစ်ကြံစည်မှု, ဒါပေမယ့်
Gangnam သွားလာရင်းဂိမ်း 3
ထိုစတိုင် Gangnam တစ် steamroller Psy ကြယ်ပွင့်သင်္ဘောကြီးပေါ်လည်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတဆင့်မသွားအတားအဆီးတွေကိုကျော်လွှားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုသင့် task ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်